Inona ny fanamarinana IP67 na IP68 ary inona no arovany amin'ny | Androidsis
Matetika isika no mahita ireo foto-kevitry ny telefaona tsy misy rano na vovoka. Ity fanoherana ity dia matetika avy amin'ny tanan'ny fanamarinana sasany. Ny tena fantatry ny mpampiasa Android dia ny fanamarinana IP67 sy IP68. Izy ireo dia karazana fiarovana roa, samy hafa, fa amin'ny tranga maro dia tsy fantatsika tsara ny dikan'izy ireo.
Noho izany, holazainay aminao bebe kokoa momba ireo fanamarinana ireo. Satria mahazatra antsika ny mahita telefaona Android miaraka amin'ny fanamarinana IP67 na IP68, raha tsy fantatry ny mpanjifa amin'ny fomba mivaingana ny tian'izy ireo holazaina, na ny haavon'ny fiarovana arosony ho an'ny telefaona.
1 Ny niandohan'ny fanamarinana
2 Fiarovana ambaratonga amin'ny vovoka
3 Haavo fiarovana amin'ny rano
Ny niandohan'ny fanamarinana
Ny fanamarinana IP67 na IP68 dia avy amin'ny fenitra iraisam-pirenena IEC60529, izay manondro ny karazan-vokatra elektronika rehetra. Ka tsy voafetra ho an'ny telefaona finday fotsiny io, fa koa ho an'ny vokatra elektronika hafa ho an'ny trano, toy ny fahitalavitra. Ny IP fanafohezana dia manondro ny fiarovana iraisam-pirenena. Aorian'ireo fanafohezana ireo dia manana tarehimarika roa isika.
Ny voalohany amin'ireo tarehimarika dia manondro ny haavon'ny fiarovana amin'ny fihoaran'ny zavatra mafy (vovoka ohatra) ary ny faharoa amin'ny fiarovana amin'ny fivoahan'ny rano (sy ranoka hafa). Noho izany, izyNy tarehimarika dia ny fitambaran'ireo ambaratonga roa ireo. Ary ho an'ny fiarovana tsirairay dia manana ambaratonga ambaratonga izahay, isaorana ireo fanamarinana toy ny IP67 na IP68.
Noho izany, amin'ireo tranga 6 ireo dia ny haavon'ny fiarovana amin'ny vovoka sy 7 na 8, miankina amin'ny tranga, ny haavon'ny fiarovana amin'ny rano. Amin'izany fomba izany dia teraka ny iray amin'ireo fanamarinana ireo. Saingy, manana ambaratonga maromaro isika ao anatin'ireo fiarovana ireo.
Fiarovana ambaratonga amin'ny vovoka
Ny voalohany amin'ireo tarehimarika amin'ity fanamarinana ity dia manondro ny fiarovana amin'ny vovoka. Ny telefaona dia iharan'ny fanandramana isan-karazany ao amin'ny laboratoara hamaritana ity haavon'ny fiarovana ity. Raha ny fiarovana ny vovoka dia manana ambaratonga enina isika, izay samy manana ny heviny avy. Ireto ny ambaratonga ananantsika amin'ity tranga ity:
0 level: Tsy manana fiarovana amin'ny vovoka na lasibatra mafy orina
1 level: Zavatra tsy manana savaivony 50 milimetatra dia tsy tokony hiditra
2 level: Zavatra tsy misy savaivony 12,5 milimetatra dia tsy tokony hiditra
3 level: Zavatra tsy manana savaivony 2,5 milimetatra dia tsy tokony hiditra
4 level: Zavatra tsy misy savaivony milimetatra 1 dia tsy tokony hiditra
5 level: Tsy misy vovoka tokony hiditra amin'ny telefaona izay mahatonga azy io tsy mandeha amin'ny laoniny
6 level: Tsy tokony hisy vovoka miditra amin'ny telefaona amin'ny toe-javatra rehetra. Io no haavon'ny ambony indrindra
Amin'ny telefaona finday Android ankehitriny dia hitantsika fa ny ny ankamaroany dia manana ambaratonga 5 na 6 amin'ity lafiny ity. Ka tsy tokony hisy vovoka afaka miditra ao anaty telefaona, araka io fiarovana io.
Haavo fiarovana amin'ny rano
Ny tarehimarika faharoa amin'ireo fanamarinana ireo dia manondro ny haavon'ny fiarovana amin'ny rano. Ka raha misy fanamarinana IP67 na IP68 dia manondro ny 7 sy 8 izahay amin'ity tranga ity. Averinay indray fa mahita ambaratonga maro amin'ity tranga ity isika, ambaratonga maro kokoa noho ny amin'ny vovoka.
Amin'ity tranga ity, ny fitsapana dia tanterahana mifototra amin'ny tahan'ny fivezivezena sy ny tsindry tsy maintsy raisin'ny rano ao anaty telefaona. Ny fotoana ilana hidirana, raha sendra izany dia zava-dehibe amin'ity tranga ity. Ka tonga amin'ny andiana fitsapana sarotra sy manan-danja kokoa. Satria raha miditra anaty telefaona ny rano dia saika tsy hiasa intsony ny telefaona. Ny haavon'ity tranga ity dia:
0 level: Tsy misy fiarovana amin'ny rano sy rano hafa.
1 level: Manohitra ny fidiran'ny rano amin'ny alàlan'ny fitetezana ny finday, izay milatsaka amin'ny haavon'ny 200 milimetatra ary maharitra 10 minitra.
2 level: Mbola mahatohitra mitete indray, na dia ahodina 15 degre aza ny telefaona hijerena triatra. Averina indray, fiaretana 10 minitra.
3 level: Amin'ity tranga ity dia rano famafazana. Tsy maintsy mahazaka litatra iraika ambin'ny folo litatra isa-minitra izy mandritra ny dimy minitra.
4 level: Tsy maintsy mahazaka rano jet, folo litatra isa-minitra mandritra ny dimy minitra. Ary koa amin'ny rano voahosotra, eo anelanelan'ny 80 sy 100 kilao isaky ny metatra toradroa.
5 level: Tsy maintsy mahazaka jet jet misy rano 12,5 litatra isa-minitra, farafahakeliny telo minitra.
6 level: Tsy maintsy mahazaka rano 100 litatra isa-minitra, miaraka amin'ny 100 Kilonewtons isaky ny metatra toradroa ary ny 12,5 milimetatra mandritra ny 3 minitra
7 level: Ny finday dia tsy mahazaka 30 minitra amin'ny halalin'ny iray metatra amin'ny rano, tsy misy zavatra miditra ao anatiny.
8 level: Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mitazona rano amin'ny halalin'ny 1,5 metatra mandritra ny 30 minitra farafaharatsiny. Ity no kely indrindra, na dia matetika aza ny mpanamboatra dia miova amin'ny hafiriana azonao atao anaty rano.
9 level: Ity haavon'ny haavon'ny rano ity dia eo ambanin'ny tsindry sy ny hafanana avo, 80 ka hatramin'ny 100 bar ny tsindry amin'ny 80 degre. Haavo mihoampampana.
Araka ny hitanao, eto dia mahita ambaratonga bebe kokoa isika. Ny tena matetika dia ny 7 sy 8, izay hitantsika amin'ny tranga toy ny IP67 na fanamarinana IP68, izay fahita indrindra eo amin'ny tsenan'ny Android. Amin'izao fotoana izao dia afaka jerentsika ny fomba fampidiran'ny marika ireo fanamarinana ireo amin'ny findainy, ho fanampiny izay mety hitarika ny mpampiasa hifidy amin'ny fividianana modely voalaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Inona no arovan'ny fanamarinana IP67 na IP68?